WOWOW Prime – Networks – MMANIME
Ghost Hound ပြောရရင်တော့ သရဲကားပါ။ကြောက်တက်သူများမကြည့်ရဘာညာပေါ့ဗျာ။ Myanime List မှာလဲ Rating က 7.49 ဆိုတော့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ခုဆိုတာသိပ်ပြောစရာမလိုလောက်ပါဘူး။ အောက်မှာ review လေးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ Suitenလို့ခေါ်တဲ့ရွာငယ်လေးက ဝေးလံပြီးတောင်တန်းတွေဘဲရှိတဲ့ကျွန်းပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ် အဲ့ရွာလေးမှာ လက်တွေ့နဲ့ ဝိဥာဥ်နယ်ပယ်ဆိုပြီးရှိနေတဲ့အပြင်သရဲတွေနဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေက လက်တွေ့ကမ္ဘာကရွာလေးအထိပါကျူးကျော်ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပြီးနောက် ငယ်ဘဝမှာစိတ်ဒဏ်ရာတွေရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသားလေးသုံးယောက်(Taro,Makoto,Masayuki) က Suitenဆိုတဲ့ရွာလေးမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုပြီးစုံစမ်းရေးစပါတော့တယ် ဘယ်လူသားမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အရာကိုလုပ်ဖို့ကြံရွယ်ပြီး ဝိဥာဥ်တွေရှိတဲ့ကမ္ဘာထဲကိုဝင်သွားတဲ့အခါ.. ဘုန်းတော်ကြီးနဲ့သူ့သမီးMiyakoကလည်းပါဝင်လာတဲ့အခါ... သူတို့လျှို့ဝှက်ချက်တွေသိသွားမလား ဖြေရှင်းနိုင်မလား ghostတွေကိုဘာလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကိုသိချင်ရင်တော့ ဇာတ်ကားကြည့်လိုက်ကြပါ... ဒိကားလေးအပတ်စဥ်Sundayတိုင်းတင်ပေးသွားမာပါ???? Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode 10 Episode 11 Episode 12 Episode 13 Episode 14 Episode 15 Episode 16 Epiosde 17 Episode 18 Episode 19
SSSS.GRIDMAN SSS-Gridman Name - SSSS--Gridman Status - ongoing Genres - Action, Mecha, Sci-fi Aired - Oct62018 to ?? Episodes - 12 Broadcast - Every saturday review - bk Review ကေတာ့ Yuta Hibaki ဆိုတဲ့ေကာင္ေလးဟာ ရုတ္တရတ္ အတိတ္ေမ့ေရာဂါ ရျပီးတျခားသူေတြမျမင္ႏိုင္တဲ့ အရာေတြ ျမင္ႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္နဲ႕အတူ ႏိုးထလာပါတယ္ သူပထမဆံုး ႀကံဳေတြ႕ရတာ ကေတာ့ သူ႔သူငယ္ခ်င္း Rikka ရဲ႕ အိမ္က computer အေဟာင္းတစ္လံုးကေန Gridman ဆိုတဲ့သူက " မင္းရဲ႕တာဝန္ကိုသတိရပါ" ...